दाङमा जहाजसहितको ड्रिमपार्क :: नारायण खड्का :: Setopati
नारायण खड्का दाङ, माघ २६
निर्माणाधिन ड्रिम पार्कमा जहाजको रंगरोगन गर्दै कामदारहरू। तस्बिरः नारायण
दाङमा हवाई जहाजसहितको ड्रिमपार्क निर्माण भइरहेको छ। झन्डै एक करोडको लागतमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ बेलभारका ड्रिम पार्क निर्माणको काम भइरहेको हो।
हवाई जहाजसहितको ड्रिमपार्क निर्माणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्डेड यति एयरको ३४ सिटे जहाँज ल्याइसकिएको छ।
उक्त जहाजलाई दुई वटा लरीमा राखेर पुस ५ गते दाङ ल्याइएको थियो। ल्याउँदा मात्रै सबै गरेर दुई लाख ४० हजार भाडा खर्च लागेको पार्क निर्माताले जानकारी दिएको छ। तर, ग्राउन्डेड प्लेनलाई कति तिरेर ल्याएको हो? भन्ने सवालमा भने उनले खुलाउन चाहेनन्। ‘आगामी वर्ष हुने नेपाल भ्रमण वर्षसम्म हाम्रो प्रोजेक्ट ३ करोड जतिको हुनेछ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
त्यो ड्रिमपार्क भित्र जानेले प्लेन चढेको अुनभव गर्न पाउन र नचढेकाले पनि त्यसको अनुभूति गर्न पाउन भन्ने उद्धेश्यले पार्क निर्माण गर्न लागिएको पार्कका परिकल्पनाकार शम्भु घिमिरेले बताए।
घिमिरेले पार्क भित्र कृतिम हिमाल, कृतिम चिडियाखाना र जिट फ्लाई निर्माण गरिने जानकारी गराए।
हाल व्यक्तिगत दुई विगाहा क्षेत्रफलमा निर्माण सुरू गरिएको यो ड्रिम पार्क भविस्यमा ५ देखि ७ विगाहा जग्गा क्षेत्रफलमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
घिमिरे पेशाले सरकारी जागिरे हुन्। पछिल्लो समय उनी एक डेढ महिना अगाडि मात्रै त्रिभुवन विमानस्थलमा जागिरेको रूपमा प्रवेश गरेका हुन्। त्यहाँ ग्राउन्डेड जहाज ल्याएर ड्रिम पार्क निर्माण गर्न लागेको उनले बताए।
जागिरमा पेन्सन भइसकेकाले भविस्यमा त्यसै बसेर समय विताउनुभन्दा केही गर्ने उद्धेश्यका साथ हवाई जहाजसहितको ड्रिम पार्क निर्माण गर्न लागिएको घिमिरेले सेतोपाटीलाई बताए।
यूएसमा रहेको डिजेले ल्याण्ड र सिंगापुरको यूनिभर्सल स्टुडियो जस्तै मिनी ड्रिमपार्क निर्माण गर्न खोजिएको घिमिरेले जानकारी दिए। उनले नेपालमा हालसम्म आफूले निर्माण गर्न लागेको जस्तै ड्रिमपार्क नरहेको दाबी गरे।
‘मानिस बिहान १० त्यहाँ प्रवेश गरेपछि बेलुका ५ बजेसम्म त्यही घुमिरहोस् र रमाईरहोस् भन्ने उद्धेश्यले मिनी डिजिले ल्याण्ड निर्माण गर्न खोजिएको हो,’ घिमिरले भने।
नेपालमा हालसम्म प्लेनसहितको संग्रहालय काठमाडौंको सिनामंगल र धनगडीमा पनि छ। तर, आफूले निर्माण गर्न लागेको संग्रहालय नभएको तर्क गरे। ‘हामी त्यहाँ पुग्ने सबैलाई बोडिङ पास पनि दिनेछौं,’ घिमिरेले भने, ‘प्लेन चढ्ने यात्रुले नझर्दासम्म अबलम्वन गर्ने सबै कुरा हामी दिनेछौं।’
साच्चिकै उडानमा जाने यात्रुलाई प्लेन भित्र चढ्दै गर्दा एउटा एयरहोस्टेज ढोकामा स्वागतार्थ राख्ने उनको योजना रहेको सुनाए। ती एयरहोस्टेजले सबै यात्रुलाई सिट बेल्ट बाँध्न सिकाउने छिन्।
पार्कका परिकल्पनाकार श्रीधर घिमिरे
त्यस्तै उनले सबै यात्रुलाई चकलेट, कोक लगायत पेय पदार्थ वितरण गर्नुको साथै प्रत्येक व्यक्तिलाई ट्वाईलेटमा गएर कसरी ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने जस्ता कुरासमेत सिकाउने योजना रहेको घिमिरेले बताए। ‘एउटा प्लेनमा चढेदेखि नझर्दासम्म त्यहाँ हुने सबै कुराहरु सिकाइनेछ,’ घिमिरेले दाबीका साथ भने, ‘ड्रिम पार्कमा पुगेको मान्छेलाई प्लेन चढ्दा कुनै समस्या हुनेछैन।’
घोराही–लमही सडक खण्डको बेलभारमा निर्माणाधिन ‘ढुण्डि ड्रिमपार्क’ शम्भुका बुवा श्रीधर घिमिरेले आफ्ना हजुर बुवाको नामबाट पार्क निर्माण गर्न लागेका हुन्। छोरा शम्भुले आफू सरकारी जागिर भएको हुँदा आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै त्यो बुवाले निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिए।
६२ वर्षीय श्रीधर घिमिरेले एक वर्ष पहिले प्रावि कर्जाहीबाट अवकाश लिएका हुन्। ‘दाङको पर्यटनमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर जहाजसहितको ड्रिम पार्क निर्माण गर्न खोजिएको घिमिरेले तर्क गरे। त्यही उद्धेश्यका साथ आफ्नो पूर्ख्यौली घरबाससहितको निजी जग्गा डेढ विगाहा उपयोग गरिएको उनले जानकारी दिए।
‘हाल डेढ विगाहाको निजी जग्गामा ड्रिमपार्क निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पार्कका लागि जग्गा अपुग भएमा छिमेकी दाजुभाइले समेत उपलब्ध गराउने वचन दिएका छन्।’
३४ सिट क्षमताको जहाज त्यहाँ राखिएपछि निर्माणधिन पार्क हेर्न जानेहरुको संख्या दिनानु दिन बढ्दै गएको छ। ‘कतिले आश्चर्य व्यक्त गर्छन्। यहाँ प्लेन राखेर के चटक देखाउन खोजिएको हो भन्ने गर्छन्,’ घिमिरेले भने, ‘हामीले कम्पनी ऐन अन्तर्गत ड्रिमपार्क दर्ता गरेर काम अगाडि बढाएका हौं।’
ड्रिमपार्क भित्र लाइसेन्समा परेका कुराहरू थ्रिडी हल, स्विमिङ पुललगायत मनोरञ्जनका अन्य साधनहरू विस्तारै थप्दै जाने घिमिरेको योजना छ। पार्क सञ्चालनमा आएपछि करिब आधा दर्जन जति मानिसले तत्काल रोजगारी पाउने उनले बताए ।
हाल जहाँजको पेन्टिङ, तथा सिटको काम र बाहिर तारवारको काम भइरहेको छ। त्यसका लागि राजधानीबाट प्राविधकको टोली झिकाइएको छ।
उनीहरुले ग्राउन्डेड जहाजका केही विग्रिएका भागहरू दुरूस्त बनाउँदै छन्। ‘काम धमाधम भइरहेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘तर हामीलाई मौसमले गर्दा केही अप्ठेरो भइरहेको छ।’
अति ढिलो भएमा नयाँ वर्षसम्म ड्रिमपार्क उद्घाटन हुने उनले बताए। त्यसपछि त्यहाँ जाने सबैलाई टिकट लाग्ने भए पनि जेष्ट नागरिकलाई भने निःशुल्क प्रवेश दिइने श्रीधर घिमिरेले जानकारी दिए।
‘विद्यार्थीलाई पनि केही छुट हुनसक्छ, तर, जेष्ठ नागरिकलाई भने प्रवेश निःशुल्क गरिनेछ,’ उनले भने ।
‘जहाजमा चढ्ने सपना सबैको हुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसैले यसको नाम पनि ड्रिम पार्क राखिएको हो।’
उनले जहाज चढ्न नपाएकाहरु त्यहाँ पुग्दा चढेकै महसुश गर्ने र चढेकाले त्यसको स्मरण गरून् भन्ने आफूहरूको उद्धेश्य रहेको बताए।
‘जहाज यही जमिन मै हुने छ, तर हामी साउन्ड सिस्टमबाट उडेको, उचाईमा पुगेको, अवतरण गर्न लागेको यात्रुलाई सबै अनुभूति गराउने छौं,’ घिमिरेले भने।
उनले उचाईमा पुग्दा हामी यति उचाईमा सुरक्षित पूर्वक उडिरहेका छौ भन्नेदेखि अब अवतरण हुने समय आयो, झ्यालबाट हेर्नुहोस भन्ने जस्ता कुराहरु यात्रुहरुलाई साउन्ड सिस्टमबाट आग्रह गरिने जानकारी दिए।
जहाज सहितको नौंलो पार्क निर्माण गरिएका उनले यसले जिल्लाको पर्यटन प्रर्वद्धनमा टेवा पुग्ने आशा व्यक्त गरे।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २५, २०७५, २१:२४:००